झु'क्किएर छो'रीको बाटो हेर्दै आमा भन्छिन्, ‘न कटर खान पाइ, न कुर्था नै लगाउन पाइ’ - Public 24Khabar
Home News झु’क्किएर छो’रीको बाटो हेर्दै आमा भन्छिन्, ‘न कटर खान पाइ, न कुर्था...
गत आइतवार ४ बजेतिर अफिसबाट फर्किएकी सिर्जना बस्नेत सोमवार विहान आफै बसेको घरमुनी अ’र्धनग्न अव’स्थामा फेला परिन् ।आफ्नै डेरा मुन्तिर अ’र्धनग्न अवस्थामा फेला परेकी सिर्जनालाई मर्निङवाकमा हिड्नेले पहिलो पटक देखे ।
उनको श’व घरमुनी लडिरहेको थियो, गाउँभरमा धेरैले थाहा पाइसकेका थिए । तर, सिर्जनाको परिवारले थाहा पाएको थिएन ।उनकी आमा सबेरै उठेर बाहिर हेर्दा मान्छे जम्मा भएको देखेपनि अन्य दिन सरह हिडडुल गर्नेहरु होलान भन्ने लागेर फेरि ढल्किइन् ।
आमाले भनिन्, गाउँलेले हल्ला गर्दै, तिम्रो छोरी भुइमा छिन भन्दा मात्रै आफु आ’त्तिएर तल पुगेछु । त्यसपछि छोरोलाई उठाए । अर्जुनधारा –११ घर भई बिर्तामोड –५ स्थित सुगम पेट्रोल पम्प उत्तर परिवारसँग बस्दै आएकी सिर्जनाको रह’स्यमय मृ’त्यू भएको पाँच दिन भइसकेको छ ।
पीडामा रहेको परिवारले न्यायको अपेक्षा गर्दै काजक्रिया गरिरहेको छ । साँझमा राम्रैसँग बनाईतुल्याई खाएर सुतेको परिवारमा कसरी बज्र’पात आइप¥यो ? प्रह’रीले अवश्य पत्ता लगाउँला ।
अवेरसम्म आमासँगै दोस्रो तलमा गफ गरेर बसेकी सिर्जनालाई आमाले नै ९ बजेतिर सुत्न पठाएकी थिइन् ।आमाले भनिन्, आमा छोरी धेरै बेरसम्म बसिम् । मैले नै सुत्न जा भन्दै उसको कोठा पठाएको थिए ।
लामो समयदेखी बिर्तामोडमा सहकारीमा संकलकको रुपमा कार्यरत सिर्जना भद्र र शालिन व्यवहारकी थिइन् । उनले आ’त्मह’त्या गरिन् भन्दा कसैले पत्याउने अवस्था छैन । यदि त्यस्तो कसैले भन्छ भने, त्यो झुट हुनेछ । काजक्रियामा बसेकी आमाको आखाँ अझै छोरी आउने बाटोतिरै छ । हरेक दिन ३ देखी ४ बजेभित्र छोरी अफिसबाट घर फर्किन्थी, सधैं प्यासेजबाट छोरीलाई पर्खिरहेको हुन्थे, आमा भन्छिन् – अब मेरो छोरी कहिले आउँदिन ।
आइतवारका दिन घर आएपछि सिर्जनाले कटर किनेकी थिइन् । उनलाई कटर धेरै मनपर्ने । आमाका अनुसार सोमवार छुट्टि हुने भएकाले दिनभरी कटर खाँदै बस्ने योजना सिर्जनाको थियो ।त्यहि दिन एक जोर कुर्था सुरुवाल पनि किनेर ल्याएकी थिइन्, सिर्जनाले । उनले नत कटर खान पाइन, नत कुर्था नै लगाउन पाइन् ।
बेलुका मासु ल्याएर रोस्ट बनाएर परिवारसँगै बसेर खाएकी सिर्जना विहान आफ्नो ओच्छ्यानमा थिनन् । अर्धनग्न अवस्थामा घरमुनी उनलाई भेटियो ।फेला परेको श’व हेर्दा आ’त्मह’त्या गरे जस्तो देखिदैन । चौथो तलामा बस्ने सिर्जना यदि हाम् नै फालेली थिइन् भने उनको शरिर त्यति सग्लो हुने थिएन । फेरि, कसैले मुन्तीर ल्यायो कि भन्दा सबै तलाका ढोकामा लक गरिएको थियो ।
प्रह’रीको तालिम प्राप्त कु’कुरलाई घट’नास्थलमा ल्याउँदा कुकुर घरमाथि सम्म नै गएको छ । यदि सिर्जना माथिबाटै हाम् फालेकी हुन् भने कुकुर कसरी सिढिबाट सुग्दै–सुग्दै माथिसम्म गयो ? यो गम्भीर छ ।बोकेर वा घिसारेर तल झारेर राखे जस्तो देखिने उनको शरिरमाथि कसैले अपराध त गरेन ?
झापा प्रहरीले पाँच दिनको अन्तरालमा अहिलेसम्म सामान्य विवरण समेत बाहिर ल्याएको छैन । यसले घटना ग’म्भीर हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।प्रह’रीका अनुसार पोष्टमार्टम रिपोट आइसकेकोछ, युवतीले लगाएको चप्पल र मोवाइल आवश्यक जाँचका लागि काठमाडौं पठाइएको छ ।यो समाचार झापाबाट प्रकाशन हुने दैनिक पत्रिका इजलास दैनिकले उत्पादन गरेको हो ।
Previous articleखुसिको खबर: जापानको सक्रियतामा धमाधम यसरी बन्दैछ नेपालकै पहिलो सवारी साधन गुड्ने आधुनिक सुरुङ मार्ग , भिडियो हेर्नुहोस (जानकारीका लागि सेयर गराै)
Next articleबेपत्ता बिना , नारायणी नदी किनारमा बुद्धको मुर्ती तिर जादै गरेको cctv मा देखियो , त्य,सपछि